Naghachi Lost Photos
Easy-eji na onye ọrụ-enyi na enyi interfaces ka ị naghachi ehichapụ photos ke akwa ala.
Mgbe echichi, na-amalite foto mgbake software na-eso 3 mfe nzọụkwụ ịrụ foto mgbake na gị onwe gị: Họrọ> Preview> Naghachi
Tupu ịmalite, biko họrọ otu n'ime ndị ụzọ anọ iji jide n'aka na ngwaọrụ ịchọrọ ka iṅomi bụ nke ọma ejikọrọ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ a nkebi ma ọ bụ ụgbọala ebe gị furu efu data emi odude
A ndepụta nke partitions hụrụ na mbanye ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa media chọta foto mgbake software ga-egosipụta. Họrọ onye na gị furu efu faịlụ odude.
Pịa 'iṅomi' na-amalite ịgụ isiokwu maka faịlụ.
The scanning oge na-adabere na nke mgbake mode họrọ.
Ị pụrụ 'kwusi' ma ọ bụ 'na-akwụsị na' scanning ke ufọt ufọt usoro. N'ihi na mma results, ị kwesịrị ị na-ekwe ka Doppler mezue.
Ị nwere nhọrọ ịzọpụta mbụ Doppler results maka na-aga n'ihu foto mgbake n'oge ọ bụla na-enweghị rescanning.
Nzọụkwụ 2. Chọpụta faịlụ gị mkpa
Chọpụta lekwasịrị data na ị chọrọ iji naghachi. Pịa 'Naghachi' gaba ebe nhọrọ interface. Ma ọ bụ pịa 'Back' ka ịlaghachi na nkebi nhọrọ interface.
Ịnwere ike ihuchalu gị ihe oyiyi tupu mgbake.
The Doppler results ga-edepụtara dị ka faịlụ formats.
Faịlụ nwere ike ota site aha, size, kere na gbanwetụrụ ụbọchị.
Ị nwere ike iji faịlụ nyo ịchọ kpọmkwem faịlụ kpomkwem na ngwa ngwa.
Nzọụkwụ 3. Họrọ a ebe ịzọpụta recoverable data
Họrọ ma ọ bụ tinye a ndekọ na-echekwa Natara faịlụ.
Anyị ukwuu atụ aro ka ị họrọ ọzọ ndekọ nke dị iche iche site na isi iyi otu, bụrụ na ọ ga-emecha overwrite isi iyi data.
Pịa 'Wubàtá Iweghachite' na ala n'akụkụ aka ekpe.
Nzọụkwụ 1. Chọpụta, họrọ zọpụta gara aga n'ihi faịlụ, na pịa 'Open'.
Nzọụkwụ 2. Preview na chọpụta faịlụ gị mkpa.
Nzọụkwụ 3. Họrọ a mgbake ụzọ ịzọpụta faịlụ.